Daabacaha darbiga, Daabacaha Dabaqa, Daabacaha Inkjet-ga Gacanta - huakehengrun
Taleefanka:+86 189 7131 9622
Daabacaha Inkjet Pass Single
daabacaha inkjet desktop
Alaabooyinka Kala Saaran
HKHR Wall Printer Mashiinka Rinjiyeynta Darbiga UV
Xawaaraha sare ee daabacaadda khad gidaarka tooska ah
CMYK inkjet printer oo loogu talagalay daabacaadda derbiga mac...
Daabacaha derbiga dibadda ee Robot Wall Printer Pri...
3D UV Mural inkjet Printing Machine Toos u ah w...
Mashiinka daabacaadda gidaarka tooska ah ee 3D Mural toos ah...
Xawaaraha sare CMYK koofiyadda caaga ah ee khadka Warshadaha C...
Mashiinka Daabacaadda gidaarka ee Tooska ah 3D Wall Pen
Xawaaraha Sare ee CMYK Maaskaro Sumada Midabka UV daabacaha
Gacanta lagu hayo Mashiinka Codaynta Daabacaadda Khadka Kulul
Codeeyaha taariikhda la qaadi karo ee yar daabacaha gacanta
Qalinka Codaynta TIJ ee la qaadi karo Mini Inkjet Printer Mac...
75mm Koodhka taariikhda daabacaha gacanta ee kuleyliyaha ah ...
Mishiinka Daabacaadda Dabaqa 3D Xawaaraha Sarreya
Khad Jet UV Dabaqa Mashiinka Xallinta Sare
Wuhan HAE Technology Co., Ltd. tan iyo sannadkii 2008, kuwaas oo ah hoggaamiyeyaasha adduunka ee Daabacaadda Inkjet, daabacaadda derbiga iyo daabacaadda dabaqa.Kani waa darbigii ugu horreeyay ee adduunka iyo daabacaadda derbiga ugu hal-abuursan oo loo isticmaali karo in lagu daabaco wax kasta oo ku yaal meel kasta oo fidsan oo tayadeedu aad u sarreyso oo ay indhahaagu rumaysan doonaan.
huakehengrun Wheel printer nooca darbiga ah waa iftiin & laalaabi karo tranporatioin, hawl fudud, xasilloon iyo 2880dpi daabacaadda xallinta sare.
Waxaa jira CMYK biiyaha ku salaysan khad daabacaha iyo mashiinka daabacaadda CMYK+W UV ee doorashada si loo buuxiyo codsiga daabacaadda macaamiisha kala duwan.
Fadlan nagu dhaaf annagu waxaan kula xidhiidhi doonaa 24saac gudahood.
Khadka UV ee dunida ugu khafiifsan oo toos ah...
Waxaan leenahay khibrad naqshadeed qani ah, qalabaynta qalabka wanaagsan iyo awoodda wax soo saarka.
Isticmaalka nidaamka kontoroolka moodeelka garaadka ee gudaha gudaha ee hadda jira, oo ay weheliso qalabka farsamaynta horumarsan si loo sameeyo qaybo, ka dhig gudbinta qalabka mid sax ah, dhaqdhaqaaq xasilloon, iyo nolol adeeg oo dheer.
Hadda, dugsiyada, hoteellada, suuqyada laga dukaamaysto, hoteellada, xarumaha barbaarinta, meelaha lagu qurxiyo, goobaha jimicsiga, iyo darbiyada bannaanka ee dhismayaasha qaar dhammaantood waxay u baahan yihiin rinjiyeyn gidaar si loo qurxiyo.
Ka fikirida waxa ay macaamiishu u malaynayaan iyo waxa ay rabaan, wax kasta oo laga soo bilaabo aragtida macaamilka, laga bilaabo cilmi-baarista ilaa fulinta, si loo daboolo dabeecadaha shakhsi ahaaneed, hagaajinta tayada alaabta, iyo dhimista kharashka wax soo saarka.
Kooxda R&D ee shirkadda ee aqoonta sare leh waxay hubisaa hal-abuurnimada joogtada ah iyo waxqabadka xasilloon ee badeecadaha shirkadda, taasoo ka dhigaysa badeecadaha shirkaddu inay ka dhex muuqdaan tartanka suuqa.
Shirkaddu waxa ay ku adkaysanaysaa in ay noqoto mid macaamiisha ah oo u janjeedha suuqa, si ay shirkadu u ilaaliso koboc wax ku ool ah oo mustaqbalka fog ah.
Kala soocida mabda'a daabacadaha khad-jidhka
1. Printer Inkjet Joogta ah Cadaadiska bamka sahayda khadku, khadku waxa uu maraa dhuumaha khad ka taangiga khad, hagaajiya cadaadiska, viscosity, oo galaa qoriga buufinta.Sida...
Dayactirka iyo dayactirka madaxa daabacaadda Inkjet
Maaddaama ay tahay qaybta xudunta u ah daabacaha inkjet-ka, madaxa daabacadu waa mid aad muhiim u ah.Madaxa daabacan waa mid aad u qiimo badan, waxayna noqon doontaa mid aad u xanuun badan in la isticmaalo wakhti dheer.Sida loo...
Cinwaanka Warshada Shirkadda Beijing: 101A, Dhismaha 11, Barxadda 3, Waddada Gaolizhang, Degmada Haidian, Beijing
Xafiiska Iibka Dibadda iyo Shiinaha Dhexe:
Hal qayb oo ka mid ah Wuhan HAE Technology Co., Ltd.
Dabaqa 6, dhismaha 2A, Sayniska Dooxada Optics iyo Dekedda Tignoolajiyada, Waddada Guanshan, Dooxada Optics, Wuhan, Shiinaha
telefoon go'an:+86 27 8750 8600
Daabacaha khad-gacan ee gacanta lagu qaato
Daabacaha Inkjet-ka ee khadka tooska ah